ADDIS ABABA, Eithiopia - Wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda Eritrea ayaa maanta gaarey magaalada Addis Ababa, ee caasimadda dalka Ethiopia si ay uga qeyb-galaan wadahadallo lagu soo afjaro colaadda mudada dheer u dhaxeysay labada dal.
Xubnaha wafdigan oo uu kamid yahay La-Taliyaha Madaxweyne Afwerki, Yemane Gebreab ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha ee ku yaalla magaalada Addis Ababa, Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iyo mas'uuliyiin kale.
Waa markii ugu horeysay mudo ka badan 20 sano ah oo wafdiga heer sare ah oo ka socda Xukuumadda Asmara booqasho ku taga dalka Ethiopia. Shacab badan oo kasoo jeeda Eritrea ayaa sidoo kale ka qeyb qaatey soo dhaweynta.
Waxaa lagu wadaa in kulamo ay la qaateen Abiy Axmed inta ay ku sugan yihiin Addis Ababa, iyadoo wadahadallada diirada lagu saarayo arrimaha muranka ka dhaxeeya labada dowladooda iyo sidoo loo soo celin lahaa xiriirkooda.
Booqashada ayaa timid todobaad kadib markii uu Madaxweyne Afwerki shaaciyay inuu wafdi u dirayo Addis Ababa si ay wadahadal ula soo galaan Xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Axmed, oo tan iyo markii ay xafiiska la wareegtay April sameysay tallaabooyin dhanka wanaagsan loo qaadey.
'Ka go'an dib u heshiisin'
Horaantii bishan, Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay si buuxda u dhaqan-gelin doonto qodobada heshiiskii Nabada ay la galeen Eritrea, kaasi oo laguu dhameynayo muranka dhanka xuduuda.
"Waxaa naga go'an inaan dib u heshiisiin la sameyno walaalaheena Eritrea, oo aan u fidinayno casuumaad ay kusoo booqanayaan Addis Ababa, si aan uga wadahadalno khilaafka keenay duruufaha hadda jira," ayuu yiri Abiy Axmed xilli uu ka hadlayay Baarlamaanka.
Heshiiska nabada ee Eritrea iyo Eithiopia oo UN-ka uu taageeray ayaa la saxiixay 2000, kadib dagaalkii dhexmaray labadan dalka ee ku yaalla Geeska Africa, oo ku muransan deegaanno xadka ku yaalla.
Abiy Axmed ayaa dhawaan shaaciyay in Eithiopia ay u celinayso Eritrea magaalada xadka ku taalla ee Badme oo kamid ah goobaha labada dhinac ay isku hayeen 28-kii sano ee lasoo dhaafay.
Eritrea iyo Eithiopia ayaa dhexmaray dagaal xooggan sanadkii 1998 kaasi oo ay ku dhinteen 80,000 oo qof, iyadoo boqolaal kun oo qofna ay ka barakaceen gobolka.
Dalka Eritrea ayaa ka go'ay Ethiopia 1993, iyadoo xiriirka labad dalka uu ahaa mudo mid aan wanaagsaneyn.
Tan iyo markii uu xilka la wareegay Abiy Axmed bishii April, dalka Ethiopia waxaa ka socota dabeyl siyaasadeed oo isbedello wadata, waxaana uu Ra'iisul Wasaaraha cusub bog cusub u furay Taariikhda dalkiisa, oo liiska hore uga jiray dalalka ay ka jiraan caburinta xooriyatul-qowlka.
Abiy Ahmed oo ka hadlay rabshadaha ka socda duleedka Addis Ababa
Afrika 18.09.2018. 10:50